कोरोना सङ्क्रमणबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी जोगाउने ? -
१४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:३१ April 27, 2021 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on कोरोना सङ्क्रमणबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी जोगाउने ?
काठमाण्डाै – विश्वमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिएसँगै नेपालमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । डाक्टरहरुले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले पहिलेभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभाव पारेको बताएका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने अवस्था भयावह बन्न सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि भीडभाडमा नजाने, घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउने, पटक-पटक साबुनपानीले हात धुनेलगायतका स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन विज्ञको सुझाव छ । पहिलो लहरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरु कम हुँदै गए पनि धेरैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न छाडेका थिए ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा जोखिम धेरै हुने भएकाले आफ्ना बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि अभिभावकले विशेष सावधानी अपनाउन सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको सुझाव छ ।
बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा
* धेरै बालबालिकाहरु जम्मा भएर खेल्ने ठाउँमा लैजान हुँदैन । त्यसले गर्दा बालबालिकामा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम हुन्छ ।
* व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।
* मास्क लगाउने तथा साबुनपानीले हात धुने गर्नुपर्छ ।
* बालबालिकालाई सिर्जनात्मक गतिविधिमा लगाउनुपर्छ ।
* बाहिरबाट आउनेबित्तिकै सिधै बालबालिकालाई समात्नु हुँदैन । सकिन्छ भने नुहाएर मात्र बालबालिकालाई लिने नत्र राम्ररी साबुनपानीले हात धोएपछि मात्र समात्ने गर्नुपर्छ ।
* घरमा बालबालिकाले भेट्ने गरी जथाभाबी मास्क फाल्न हुँदैन ।
* बालबालिकालाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ ।
* उनीहरुको खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
वृद्धवृद्धालाई कसरी हेरचाह गर्ने ?
* सकेसम्म ज्येष्ठ नागरिकसँग लामो समय नबिताउने
* घर बाहिर निस्कँदा र घर फर्किसकेपछि पनि विभिन्न सावधानीका उपाय अपनाउने ।
* स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि प्रयोग गर्न लगाउने ।
* भीडभाडमा जान नदिने र आफू पनि नजाने ।
* ज्येष्ठ नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्नका लागि पौष्टिक आहारामा ध्यान दिने।
* पूजाआजा भजनकीर्तन, जात्रापर्व सत्संग आदिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहभागी नगराउने ।
* ज्वरो, रुघाखोकी लागेका बालबालिका एवम् वयस्क तथा अन्य ज्येष्ठ नागरिक पनि स्वस्थ ज्येष्ठ नागरिकको नजिक नजाने ।
* ज्येष्ठ नागरिकको नजिक जाँदा साबुनपानीले हात धोएपछि स्यानिटाइजर हातमा लगाएर मात्र जाने।
* परिवारका सबै सदस्यले खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा कुहिनाले छोप्ने । रुघाखोकी लागेमा मास्कको प्रयोग गर्ने ।
* ज्येष्ठ नागरिकलाई घरभित्रै शारीरिक अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउने । यसमा साधारण किसिमका शारीरिक व्यायाम गराउन सकिन्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
* ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिले नै दम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएको छ भने त्यसको नियन्त्रणको बारेमा जानकारी राखिरहनुपर्छ ।
* ज्येष्ठ नागरिक घरभित्रै लामो समय एक्लै बस्दा मानसिक समस्या हुने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि परिवारका अन्य सदस्यले बेलाबेलामा कुराकानी गरिरहनुपर्छ ।
* ज्येष्ठ नागरिकलाई यस रोगका बारेमा तथ्यपरक सूचना एवम् जानकारी दिइरहनुपर्छ
* ज्येष्ठ नागरिक तथा परिवारका अन्य सदस्यहरु धूमपान, जाँडरक्सीबाट टाढै रहनुपर्छ ।
चट्याङ लागेर अछाममा युवतीको मृत्यु , २ जना घाइते
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १९:१५ April 26, 2020 Kanchanpur Khabar
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १६:५९ March 12, 2021 Kanchanpur Khabar